ပရလောက အကြောင်း – Thutastar
ကားပေါ်လိုက်လာတဲ့ ကားကြိတ်ခံပြီးသေခဲ့ရတဲ့ မောင်ထိန်လင်းအောင်..( ရုပ်သံ )
ဆေးရုံကို လူနာပို့ပြီးပြန်လာတဲ့ နာရေးကားပေါ်ကို ကားကြိတ်ခံရပြီးသေဆုံးခဲ့တဲ့ အသက် ၂၈နှစ်အရွယ် မောင်ထိန်လင်းအောင် လိုက်ပါလာခဲ့တာကို လူနာတင်ယာဉ်မောင်းသူ မှ မြင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ပါ ။
ပရလောက တကယ်ရှိတယ် မကြာသေးခင်က အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါ( ဖြစ်ရပ်မှန် ) မကြာသေးခင်က အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါ။ တိတိကျကျပြောရရင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၁၀ လပိုင်းလောက်က အဖြစ်အပျက်လေးပေါ့။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း အဲဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျွန်တော့် စာဖတ်သူတစ်ဦးက အကြောင်းစုံပြောပြရင်း ပုံတွေပါပို့ပေးလို့ ပရလောကဆိုတာ တကယ်ရှိပါလားဆိုတဲ့ သက်သေပြချက်တစ်ခုကို ထပ်မံ ရရှိခဲ့တာပါ။ ပရလောက ဆိုတာရှိရင် နောက်ဘဝဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာသည် သက်သေပြပြီးသားဖြစ်တာမို့ ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမမှာ တည်မြဲကြဖို့ သတိပေးရင်း မကောင်းမှုရှောင် ကောင်းမှုဆောင်ကြစေဖို့ ဒီစာကို ရေးပါတယ်။ နေရာနဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကို အမှန်အတိုင်းရေးသားမှာဖြစ်ပေမယ့် ကာယကံရှင်တွေရဲ့ အမည်နာမတွေကိုတော့ ထည့်သွင်းရေးသားသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်စုံတစ်ဦးကို ထိခိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း ဒီ Post ကိုအချိန်မရွေး ဖျက်ပေးသွားမှာပါ။ အဖြစ်အပျက်လေးက ဒီလိုပါ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၁၀ လပိုင်းက
Comments Off on ကြိုးဆွဲချသေတဲ့ ညီအစ်မသုံးယောက်
ကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့ (၁၀) တန်းတွေကို Night Guide ပြန်လုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်..၊ Night Guide လုပ်ပြီး သုံးနှစ်မြောက်မှာ ၀ိုင်းတစ်ခုကနေ Night Guide လုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းလာခဲ့ပါတယ်…၊ အဲဒီဝိုင်းက ဘူတာဘက်မှာရှိတာပါ..၊ ကျွန်တော့်အိမ်ကနေ ပုံမှန်အတိုင်း ဆိုင်ကယ်စီးသွားရင် မိနှစ် (၂၀) လောက်တော့ စီးရပါမယ်..အဲဒီသွားတဲ့လမ်းမှာ… နာမည်ကြီးအိမ်ပျက်ကြီး တစ်အိမ်ရှိပါတယ်…။ နာမည်ကြီးတာကတော့ အဲဒီအိမ်မှာ အရမ်းချောတဲ့ ညီမသုံးယောက်နေကြောင်း၊ တစ်နေ့ ဘာအကြောင်းကြောင်းမှ မရှိပဲ ညီမသုံးယောက်လုံး အိမ်ထဲမှာ ဆွဲကြိုးချပြီးသေနေကြောင်း၊ သူတို့ သုံးဦး မကျွတ်မလွတ်ဘဲ အခုချိန်ထိ လမ်းသွားလမ်းလာတွေကို ခြောက်လှန့် နေကြောင်း … စသည်ဖြင့် …ကြားသိထားပါတယ်…ဒါတွေက ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိပါဘူး… ကျွန်တော်၎ နှစ်သားအရွယ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလို့တော့ သိရပါတယ်… ကျွန်တော်ကတော့ ယခင်က မကြုံတွေ့ဖူးပါ…
ငါ့ကျောင်းမှာ မနေနဲ့ ထွက်သွားစမ်းဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးတစ္ဆေကြီးအကြောင်း
Comments Off on ငါ့ကျောင်းမှာ မနေနဲ့ ထွက်သွားစမ်းဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးတစ္ဆေကြီးအကြောင်း
တစ်နေ့သတွင် စာရေးသူ နတ်စည်တော်တစ်ယောက် ရေးဖော်ရေးဖတ်ဖြစ်ကြသည့်၊ ကဗျာဆရာ စာရေးဆရာများနဲ့ “အောင်သိဒ္ဓိလက်ဖက်ရည်”ဆိုင်မှာ စကားလက်ဆုံကျနေခိုက်၊ ဦးဇင်းတစ်ပါး ကျနော်တို့ဆီကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာပါတယ်။ ကဗျာဆရာ အာကာချိုက အဆိုပါ ဦးဇင်းကို ခရီးဦးကြိုပြုရင်း ကျနော်တို့လည်း မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ ဦးဇင်းဘွဲ့အမည်မှာ ဦးသုတပါလဖြစ်ပြီး၊ ကလောင်နာမည်ကတော့ သော်သစ်တည်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ စကားကောင်းနေရင်း သရဲအကြောင်းဆီကို စကားလမ်းကြောင်းက ပြောင်းသွားပါတယ်။ ဦးသုတပါလ(ခ) သော်သစ်တည်ကတော့ နေ့ဆွမ်းဘုဉ်းပေးချိန်မို့ ကျနော်တို့ကပ်တဲ့ ဆွမ်းကွမ်းကို အလှူခံတော်မူပြီး၊ ကျနော်တို့ ပြောသမျှကိုသာ နားထောင်နေပါတယ်။ သူ ဆွမ်းဘုဉ်းပြီးတော့ ချောင်းဟမ့်ပြီး ” ဒကာ နတ်ကြီးက … သရဲအကြောင်း တယ်စိတ်ဝင်စားတယ် ထင်တယ် “ဟု မိန့်ပါတယ်။ ကျနော်က ” မှန်ပါ တပည့်တော်ကတော့
Comments Off on ပရလောက တကယ်ရှိတယ် မကြာသေးခင်က အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါ( ဖြစ်ရပ်မှန် )
မကြာသေးခင်က အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါ။ တိတိကျကျပြောရရင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၁၀ လပိုင်းလောက်က အဖြစ်အပျက်လေးပေါ့။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း အဲဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျွန်တော့် စာဖတ်သူတစ်ဦးက အကြောင်းစုံပြောပြရင်း ပုံတွေပါပို့ပေးလို့ ပရလောကဆိုတာ တကယ်ရှိပါလားဆိုတဲ့ သက်သေပြချက်တစ်ခုကို ထပ်မံ ရရှိခဲ့တာပါ။ ပရလောက ဆိုတာရှိရင် နောက်ဘဝဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာသည် သက်သေပြပြီးသားဖြစ်တာမို့ ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမမှာ တည်မြဲကြဖို့ သတိပေးရင်း မကောင်းမှုရှောင် ကောင်းမှုဆောင်ကြစေဖို့ ဒီစာကို ရေးပါတယ်။ နေရာနဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကို အမှန်အတိုင်းရေးသားမှာဖြစ်ပေမယ့် ကာယကံရှင်တွေရဲ့ အမည်နာမတွေကိုတော့ ထည့်သွင်းရေးသားသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်စုံတစ်ဦးကို ထိခိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း ဒီ Post ကိုအချိန်မရွေး ဖျက်ပေးသွားမှာပါ။ အဖြစ်အပျက်လေးက ဒီလိုပါ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၁၀ လပိုင်းက ပုဂံကိုလာတဲ့ ဘုရားဖူးကားတစ်စီးက ကြက်ကြော်ကောင်းတယ်ဆိုပြီး နာမည်ကြီးတဲ့
ပတ်ဝန်းကျင် မှာ ကျနော်တို့ ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ သရဲ တွေ တကယ်ရှိနေသလား ?
Comments Off on ပတ်ဝန်းကျင် မှာ ကျနော်တို့ ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ သရဲ တွေ တကယ်ရှိနေသလား ?
သင် သရဲ၊ တစ္ဆေ တွေကို ယုံပါသလား ? ဒါဟာလူတိုင်းမေးလေ့ရှိကြတဲ့ မေးခွန်းပါ၊ သရဲ ၊ တစ္ဆေနဲ့ ၀ိညာဉ်ဆိုတဲ့ အရာတွေ တကယ်ရှိမရှိဆိုတာဟာ ရှေးယခင်ကတည်းကနေ ယနေ့ထက်တိုင် ငြင်းခုန်နေကြဆဲ အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ။ ယနေ့ရှင်သန်နေတဲ့ လူသားများရဲ့ တစ်ဝက်လောက်က သရဲရှိတယ်ဆိုတာကို မယုံဘူးလို့ မငြင်းကြပါဘူး၊ တစ်ခြားတစ်ဝက်ကတော့ သိပ္ပံနည်းကျရှင်းပြနိုင်တဲ့ ကိစ္စများကိုသာ ယုံကြည်ပြီး၊ ၀ိညာဉ်လောကဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းတွေပါလို့ ထင်မြင်ယူဆထားကြပါတယ်။ သရဲကို ယုံမယုံမစဉ်းစားခင်၊ သရဲ ဆိုတာဘာလည်းလို့ မေးကြည့်ရအောင်.. ယေဘူယျအားဖြင့် သရဲဆိုသော အယူအဆက၊ လူတစ်ဦး (သို့မဟုတ်) ရှင်သန်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခု သေဆုံးသွားပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခန္ဓာမရှိတဲ့အခြေအနေ၊ တမလွန်ဘ၀ တစ်ခုလို့ လူအများက ယူဆထားကြပြီး အများစုသော ဘာသာရေးအယူအဆများထဲမှာလည်း တစ္ဆေ၊
Comments Off on ဘုမ္မိယ သိုက်စောင့်မကျွတ်လွတ်သူတို့ နှင့် အဓိဠာန်ဝင်ကြုံတွေတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်
” နန်းမြိုင် အခန်း 101 နဲ့ အိပ်မက်အရ ဆီမီးသွားလှူပေးခဲ့တဲ့ ရတနာဆီမီးဘုရားမှ အဖြစ်အပျက်များ ” ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ ပြင်ဦးလွင်ရောက်တော့ နန်းမြိုင်ဟော်တယ်ကို ပထမဆုံးဝင်တယ် ။ အခန်းယူပေါ့ ။ အခန်း 101,102,107 သုံးခန်းယူတဲ့အခါ အခန်းနံပါတ် 101ကို သူတို့က မငှါးဘူး ။ ည၁၂နာရီကနေ၃နာရီအထိ ဝင်အိပ်ခွင့်တော့ပေးတယ် ။ အခန်းခမပေးရဘူးပေါ့ ။ ည၁၂နာရီမှာ သော့လာယူဆိုပြီးပြောတာနဲ့ အခန်းသော့ကို ည၁၂နာရီမှာ တာဝနိကျဝန်ထမ်းဆီကနေယူလာခဲ့ပြီး ဇာတ်လမ်းစပါတော့တယ် ။ အခန်းတံခါးဖွင့်ပြီး သိပ်မကြာခင် ခွေးတွေ စဟောင်ပါတော့တယ် ။ အဲဒါနဲ့ ပြင်ဦးလွင်မြို့ထဲက ထမင်းစားပြီးအပြန် ဝယ်လာခဲ့တဲ့ အကင်တွေကို ဘူးနဲ့ပဲချကျွေးပေးလိုက်ပါတယ် ။ နောက် ကျွန်တော်နဲ့ ဆရာNobel
ညမှောင်မှောင်ကားလမ်းဘေးမှာ ငုပ်တုပ်ထိုင်နေတဲ့အရာကြောင့် ထိတ်လန့်နေသူများ
Comments Off on ညမှောင်မှောင်ကားလမ်းဘေးမှာ ငုပ်တုပ်ထိုင်နေတဲ့အရာကြောင့် ထိတ်လန့်နေသူများ
သရဲတစ္တေကို ယုံတဲ့သူတွေလည်း ရှိသလို၊ မယုံတဲ့သူတွေလည်း ရှိနေကြပါတယ်။ သူတို့တစ်တွေကြားထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ပဋိပက္ခဟာ ကမ္ဘာဆုံးသည့်တိုင်အောင် ပြေလည်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ယုံတဲ့သူကလည်း သူတို့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ခွင့်ရှိသလို၊ မယုံတဲ့သူတွေကလည်း လွတ်လပ်စွာ မယုံကြည်ခွင့်ရှိတယ်လို့သာ မှတ်ယူလိုက်ရင်တော့ ပြေလည်နိုင်ကောင်းပါတယ်။ အခု မကြာသေးခင် ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းက လူမှုကွန်ယက်မှာ ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ ဗွီဒီယိုတစ်ခုထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ဗွီဒီယိုဟာ ကား Dashcam နဲ့ မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပြီး သရဲလို့ အစက ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဗွီဒီယိုကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးကတော့ ပထမတော့ ကြောက်မိပေမယ့်၊ နောက်ပိုင်းမှာ ဗွီဒီယိုထဲပါတဲ့ အရာဝတ္ထုဟာ ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ ပို့စ်ပိုင်ရှင် Myrtle Sarrosa က အဖြစ်သနစ်ကို ပြန်လည်ပြောပြရာမှာ
မင်းရာဇာတို့ရဲ့ ရိုက်ကွင်းဓာတ်ပုံထဲတွင်ပါလာသော မကျွတ်မလွတ်သေးသူတစ်ဦးရဲ့ ဝိညာဉ်ပုံ
Comments Off on မင်းရာဇာတို့ရဲ့ ရိုက်ကွင်းဓာတ်ပုံထဲတွင်ပါလာသော မကျွတ်မလွတ်သေးသူတစ်ဦးရဲ့ ဝိညာဉ်ပုံ
သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေကို တွေ့ကြုံဖူးသူတိုင်းက မကျွတ်မလွတ်ဝိညာဉ်တွေ တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ကြပေမယ့် အချို့ ကတော့ မယုံမကြည်ဖြစ်နေကြဆဲပါပဲ ။ ခုလည်း အငြင်းပွားစရာ ပုံရိပ်တစ်ခုကို သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာက ပြသလိုက်တာပါ ။ သူတို့ရိုက်ကူးနေတဲ့ ရိုက်ကွင်းရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ကူးရာမှာ ပါဝင်လာတဲ့ လက်ပြတ်ကြီးတစ်ဖက်ရဲ့ ပုံရိပ်ကို ပြသရင်း ” ထူးဆန်းသော အဖြစ်ပြက် ဒီနေ့ နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီး မောင်းမကန်ကမ်းခြေမှာ ဇာတ်ကားရိုက်နေရင်း ပင်လယ်ထဲမှထူးဆန်းတဲ့ လက်ကြီးပေါ်လာ။တပည့်မှမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်ပေးရင်း Camera effect မဟုတ် ပြတ်သားစွာပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ နယ်ခံများမှပြောကြသည်မှာ Y8 စစ်လေယဉ်ပျက်ကြသောကျောက်နီမှော်ကမ်းခြေနားမှဖြစ်သည်လို့ပြောကြသည်။မကျွတ်မလွတ်များရှိခဲ့ပါက အမြန်ဆုံးကျွတ်လွတ်ကြပါစေဗျာ။24.2.2018 နောက်တယ်မထင်ပါနဲ့ ဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားပေးပါလားသူငယ်ချင်းတို့ ” လို့သူကဆိုထားခဲ့ပါတယ် ။ ပုံတွေထဲမှာတော့
မကျွတ်လွတ်သေးတဲ့ သမ္မတဟောင်းတွေရဲ့ ဝိဥာဉ်များနဲ့ အိမ်ဖြူတော်
Comments Off on မကျွတ်လွတ်သေးတဲ့ သမ္မတဟောင်းတွေရဲ့ ဝိဥာဉ်များနဲ့ အိမ်ဖြူတော်
အိမ်ဖြူတော်ဟာ အမေရိကန်သမ္မတနဲ့ သမ္မတကတော်တို့ နေထိုင်တဲ့ စံအိမ်အဖြစ် ၁၈၀၀ ပြည့်ခုနှစ်လောက် ကတည်းက စတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူမှန်းမသိတဲ့ ခြေသံတွေ၊ တံခါးခေါက်သံတွေ၊ တံခါးကို ထုရိုက်သံတွေ၊ ခွေးဟောင်သံတွေ နဲ့ ရုတ်တရက်ချမ်းစိမ့်စိမ့်ဖြစ်လာတဲ့ ခံစားမှု တွေကို အိမ်ဖြူတော်မှာ နေထိုင်တာဝန်ကျဖူးတဲ့ လူတိုင်း ခံစားခဲ့ဖူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တခါတလေမှာ အိမ်ဖြူတော်ထဲမှာ လှည့်လည်သွားလာနေတဲ့ အဖြူရောင်အရိပ်သဏ္ဍာန်တွေ တွေ့ ရတယ်လို့ နာမည်ကြီးပါတယ်။ သူသေမှာကို ကြိုသိမြင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ အေဗရာဟင်လင်ကွန်း ရဲ့ ၀ိဥာဉ်ကို ခဏခဏ တွေ့ ရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တစ်ချို့ လူတွေအပြောအရ လင်ကွန်းရဲ့ ၀ိဥာဉ်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချိန် ဆိုရင် ပင်မခန်းမကြီးနဲ့ လင်ကွန်းအိပ်ခန်းတစ်လျှောက်မှာ တွေ့ ရှိရတယ်လို